Nke a bụ ihe ndị mmadụ na-ekwu banyere ebe nchekwa na-enyocha nyocha
Nkọwa nke Kathon CG na Kathon cg II: a chlorzexazonone / asothianonone. Ebumnuche: Shampoo, ihe eji eme ihe, ebe a na-asa ahụ na Gel, aka Snitezer, ụlọ mposi, na ndị ọrụ elu. Jiri ọkwa: 0. 1% site na ibu (dị ka enyere) na ngwaahịa itucha (15 ppm a. M., Max); 0. 05% site na ibu (dị ka enyere) na-ahapụ ngwaahịa (7. 5 PPM a. M., Max).
A jụkwara ya ma gọọmentị ga-ebute ụzọ dị iche iche nke nnukwu osisi na-esote, nke ga-adịrị gị mfe ịdabere ike na oke mmiri. Mana o kwuru na ha ga-ekpebi ebe ndị ọzọ ga-adabere na akụkụ ndị ọzọ ga-adabere n'ọtụtụ ihe ndị ọzọ, gụnyere ọnụọgụ ike dị na mpaghara ahụ ma mpaghara ahụ dị ala
Uru ya dị ka 0. 93. 93. Nnọkọ 3 na-egosi nkesa okpomọkụ na-ekesa site na ngwanrọ ọkụ na-ekpo ọkụ na ngwanrọ na-acha ọkụ na maapụ okpomọkụ tụrụ. Iji nweta ntụle ziri ezi karị, nkesa okpomọkụ n'akụkụ ogologo nke ụlọ mmanya dị na njedebe nke jụrụ oyi na ọnụ ọgụgụ 4. Ebe ọ bụ na njehie ikwu na-erughị 5%, anyị nwere ike ịhụ ezigbo agbanwe agbanwe n'etiti anwansị na nha.